Akhriso: War ka soo Baxay Beesha Caalamka oo ku Wajahan Dowlada Federaalka iyo Maamulada Galmudug iyo Puntland | Kismaayo24 News Agency
Akhriso: War ka soo Baxay Beesha Caalamka oo ku Wajahan Dowlada Federaalka iyo Maamulada Galmudug iyo Puntland
Friday October 14, 2016 - 10:55 under Somali News by Tifaftiraha K24
Qoraal Wadajir oo ay Muqdisho si wadajir ah uga soo saareen QM,Miodwga Afrika, Midowga Europe, Maraykanka iyo IGAD ayaa ku baaqay in la qaado Tallaabo si degdeg ah loogu joojinayo colaadda ka soo cusboonaatay Gaalkacyo, laguna dilay ugu yaraan 6 qof.
“Waxaan ka codsanaynaa Hoggaamiyayaasha Galmudug iyo Puntland inay isticmaalaan Awoodooda sidii degdeg loogu dhameeyn lahaa Dagaalkaasi, lana kormeero Heshiiska Xabbad-joojinta ee ay Hoggaamiyayaasha Beelaha iyo Hoggaamiyayaasha Diinta wada gaareen bishan October 9da” sidaa waxaa yiri Ergayga Gaarka ee Xoghayaha Guud ee QM ee Somalia, Michael Keating.
Waxa uu intaasi ku daray in Labada maamul gobaleed ee Federalka Soomaaliya in lagu imtixaami doona sida ay Isku xakameeyaan iyo in ay Ciiddankooda Ammaanka ka saaraan Gaalkacyo iyo hareeraheeda, si loo dhiso Tallaabooyin abuuri kara Kalsooni wadajir ah.
Hadalka Qoraalka ee ay soo wada saareen Saaxiibadda Somalia waxaa lagu soo dhaweeyey dadaalka Odayaasha Deegaanka, Culumaa’udiinka iyo Hoggaamiyayaasha kale ee Bulshadda si loo joojiyo Dagaalka Gaalkacyo iyo in la yareeyo Xiisadaasi.
Qoraalka ayaa lagu sheegay inay Labada maamul-gobaleed waxay dagaalameen mar hore, kaasi oo sababay dhimasho, Barakac, Burbur Hantiyeed, iyadoo Boqolaal qof oo Rayid ah horey uga barakaceen Dagaaladaasi..
Wararka Deegaanka ayaa sheegay in ku-dhawaad 40 qof lagu dilay dagaal lagu hoobtay oo sannadkii hore dhacay, kaasi oo soo cusboonaaday markii la dhisay Maamulka Galmudug State.
Dhinaca kale, Saaxiibadda Caalamka waxay ugu baaqeen Madaxda Galmudug iyo Puntland inay dhaqan-geliyaan Heshiiskii Nabadda ee ay kala saxiixdeen bishii Disembar ee sannadkii hore ee 2015-kii, kadib, dagaalkii dhacay dabayaaqadii bishii Nofember ee sannadkii hore.